‘संगीत सोख होइन, साधना हो’ : नविन के. भट्टराईको « Ramailo छ
‘संगीत सोख होइन, साधना हो’ : नविन के. भट्टराईको
प्रकाशित मिति : Apr 9, 2019
समय : 5:42 pm
नविन के. भट्टराई एक सफल र स्थापित भईसकेका पप गायक हुन् । अहिले पनि उनी स्टेज कार्यक्रममा व्यस्त छन् । उनी स्टेजमा सातामा दुई वटा सम्म लाइभ कार्यक्रम दिईरहेका हुन्छन् । पछिल्लो समय उनको पहिचान लाइभ सिङगरको रुपमा रहेको छ । उनी लाइभ कार्यक्रममा निकै नै समय खर्च गरिरहेका हुन्छन् । म्युजिक भनेको लाइभ हो भन्ने उनको बुझाई रहेको छ । उनी भन्छन्, ‘अरुको अगाडि गीत गाएर खुशि बनाउन सक्नु गायकको कला हो ।’
उनको गीत बजारमा आइरहेको हुन्छ तर प्रचार प्रसार भने त्यति गर्दैनन् । उनले भने, ‘कसले मेरो गीत सुन्यो कसले सुनेन भन्ने लेखा जोखा राख्दैनन् । आफुलाई मन परेको गीत सुन्न पाउने दर्शकको अधिकार हो । यदि मेरो गीत मन पराउनु हुन्छ भने खोजी खोजी सुन्नु हुन्छ ।’
करिब २५ वर्ष देखि निरन्तर सांगीतिक क्षेत्रमा लागेका भट्टराईले सांगीतिक क्षेत्रमा लामो अनुभव संगालेका छन् । सत्तरीको दशकमासम्म आइपुग्दा उनी एक सफल गायक, रचनाकार र संगीतकारको रुपमा चिनिन्छन् । उनले आफ्नो संगीतिक यात्रालाई केहि फरक शैलीमा प्रस्तुत गरेका थिए । सुरुवात कदम नै फरक तरिकाले चालेको हुदाँ चर्चामा आउन समय लागेको बताउँछन् । उनले भने, ‘चर्चा बटुल्नकै लागि भनेर सांगीतिक क्षेत्रमा लागेको होइन । आज पनि सोसल मिडियामा आएर चर्चा कमाउँ भन्ने सोच छैन ।’
हरेक मानिसहरु चर्चाको पछि लागेर म्युजिकली (टिकटक), युटुब, फेसबुक जस्ता सोसल साइटमा सक्रिय भईरहेका छन् । यसको प्रभावले गायन विधामा लाग्ने व्यक्तिलाई नछोएको भने पक्कै होइन तर भट्टराईले अलि फरक सोच लिएका छन् । यहाँ सम्म कि उनलाई आफ्नो पहिलो गीत चर्चामा आएको पनि थाहै भएन ।
उनी संगीतको लत बस्दा नबस्दै अंग्रेजी गीत तर्फ आकर्षित भएका थिए । उनले नेपाली गीत गाउँदैनन् थिए तर जब उनले सुरेश कुमार क्षेत्रीको गीत सुन,े उनलाई लाग्यो अब म पनि नेपाली गीत गाउछु । उनलाई मन पर्ने गायक सुरेश कुमार क्षेत्री, दिप श्रेष्ठ, सुगम पोखरेल, अनिल सिंह हुन् । नेपाली गीत गाउँन प्रोत्साहन गर्ने गायक भने सुरेश कुमार क्षेत्री नै हुन् । उनले नेपाली गीत गाउन थाल्दा ब्याण्डमेट साथीहरु रिसाएको कुरा सुनाए । नेपाली गीत गाएर अहिले युवा पुस्ता देखि लिएर सबैको लोकप्रिय बनेका छन् ।
उनले ब्रिटिस रक्क ब्याण्ड, अमेरीकन रक्क ब्याण्डको कभर गीतबाट गीत गाउन सुरु गरेको हुँदा अहिले कभर गीत गाउनेप्रति नकरात्मक सोच नभएको बताए । उनी भन्छन्, ‘जिन्दगीभर कभर गीतको भरमा बस्न भएन । सिक्ने भनेको अरुको गीतबाट नै हो । कभर गीतले नयाँ पुस्तालाई सिक्न प्रोत्साहन गर्छ ।’
‘आँखामा तिमीलाई’ बोलको गीतबाट उनले सांगीतिक यात्रासुरु गरेका हुन् । सुरुमा यो गीत एफ.एमले बजाउन मानेको थिएन । गीत बजाउन नमानेपछि उनले त्यति जोड गरेनन् । तर करिब एक वर्ष पछि एकाएक उनको गीत बजारमा गुन्जिन थाल्यो । उनीसँग एउटा किस्सा अझै ताजै छ । त्यतिबेला उनी काठमाडौं युनिर्भसिटीमा संगीत सिक्न जान्थे । संगीत सिकेर फर्किदा भक्तपुर बस पार्कमा गाडी रोकिन्थियो । उनी त्यहाँबाट हिँड्दै घर तर्फ लाग्दै थिए, घर जाने क्रममा उनले आफ्नो गीत समोसा पसल, मिठाई पसल, फैन्सी पसल जताततै ‘आँखामा तिमीलाई’ बोलको गीत गुन्जिएको सुने । तब मात्र उनलाई सांगीतिक क्षेत्रमा आउनलाई प्रेरणा मिलेको थियो ।
एफ.एमहरुले गीत नबजाउँदा हर कोहि निराश हुन्छ । उनलाई पनि निराश बनाएको थियो तर उनले आशा मारेका थिएनन् । संगीत सिक्दै थिए, बजारमा यो गीत बज्दा उनलाई लागेको थियो ‘ए मेरो गीत त हिट भएछ ।’ सांगीतिक माहोललाई उनले सोचे भन्दा फरक पाएका थिए ।
जब उनको गीत हिट भयो उनले गीत बजाउन नमानेका पल सम्झिए । पहिलो पटक उनको गीत दिपेश श्रेष्ठले हिट्स एफ.एममा बजाए, त्यस पछि दिनेश डिसीले कान्तिपुरमा बजाएपछि गीतले बजार तताएको थियो । उनी आज पनि यो गीत हिट हुन्छ भनेर गीतको रचना गर्दैनन् । मेहेनत, आत्म विश्वास र भित्री आत्माबाट निस्कने गीतमा मात्र नविन विश्वास राख्छन् । उनी प्रश्न गर्दै भन्छन्, ‘आफ्नो गीत सुनेर आफैलाई सिरिङ्ग नलागेसम्म अरुलाई कसरी मन पर्न सक्छ ?’ उनी कहिले टेण्ड फलो गरेर गाएको गीत हिट हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास राख्दैनन् । उनले आश्र्चय जनाउँदै भने, ‘अहिलेका युवापुस्ताले एउटा गीतको आधारमा म हिट भएँ वा फ्लप भएँ भनेको सुन्दा अचम्म लाग्छ ।’
प्राय: गायकहरु आज भोली फास्ट गीत गाउँछन् तर उनको स्टेज कार्यक्रममा ‘आँखामा तिमीलाई’, ‘फिका फिका’, ‘साँझ पख’ जस्ता गीतबाट सुरुवात हुन्छ । उनी दर्शकहरु नाचुन भन्दा पनि झुम्मुन भन्ने सोच राख्दछन् । ‘गीत भनेको दर्शकहरुले पनि आँखा चिम्लेर महसुस गर्न सक्ने खाल्को हुनु पर्छ । एक आर्टिसले दर्शकको दिल र दिमागलाई जित्ने खाल्को गीत निकाल्नु पर्छ । दर्शक श्रोताले आफूले महसुुस गरेर आफ्नो वर्तमान, भविष्य जीवनलाई गीतमा उतार्न सक्ने खाल्को हुनुपर्छ । यति गर्न सकेन भने कलाकारले आफ्नो समय बर्बाद गरेको छ भनेर बुझ्दा हुन्छ । पाँच लाखले सुनेर गीत हिट हुने होइन पाँच जनाले सुनेर दिने प्रतिक्रिया सकरात्मक हुनु पर्छ त्यो नै एक सफल गायक हो ।’
उनी आफू गीत संगीत क्षेत्रमा निकै सन्तृष्ट रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन, ‘मानिसहरु आफु सन्तृष्ट कहाँ हुन्छु भनेर थाहा पाउन चालिस पैतालिस वर्ष लगाउँछन् र पछि पछुताउँछन् तर मेरो त्यस्तो छैन म जुन क्षेत्रमा लागेको छु एकदमै सन्तुष्ट छु । परिवारको पनि राम्रो सर्पोट छ ।’
उनले सन्तुष्ट भएरै आफुलाई सांगीतिक क्षेत्रमा स्थापित गरेको बताउँदै भने, ‘आफु जुन कुरामा फिट हुन्छु जस्तो लाग्छ त्यहि क्षेत्रमा आउनु पर्छ भन्ने भावनाले सांगीतिक क्षेत्रमा लागें ।’ उनको बिहानीको सुरुवात संगीत साधनाबाट हुन्छ र साँझ पनि संगीत साधनाबाट नै हुन्छ । लक्ष्मिलाई खुशि बनाउन सजिलो छ तर सस्वतीलाई खुशि बनाउन गाह्रो छ भन्दै उनले साधनामा २५ वर्ष बिताएका छन् । उनको भनाई अनुसार, ‘संगीत भनेको सोख होइन, साधना हो ।’